चितवन मेडिकल कलेजमा मुटुको शल्यक्रिया पुनः सुरु – Sourya Online
चितवन मेडिकल कलेजमा मुटुको शल्यक्रिया पुनः सुरु
सौर्य अनलाइन २०७८ साउन ७ गते २०:४१ मा प्रकाशित
चितवन । चितवन मेडिकल कलेजले पुनः मुटुको शल्यक्रिया सुरु गरेको छ । विगत केही वर्षअघि मुटुको शल्यक्रिया सुरु गरेको कलेजले केही समय बन्द गरेको थियो । सेवा सुरु गरेसँगै कलेजले एउटा शल्यक्रियासमेत गरेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिश्चन्द्र न्यौपानेका अनुसार अब कलेजमा नियमित शल्यक्रिया हुनेछ । यस विभागको नेतृत्व प्राडा अनिल आचार्यले गरेका छन् । १० वर्ष काठमाडौंको गंगालाल हृदयरोग केन्द्र र तीन वर्ष मेडिसिटी हस्पिटलमा काम गरिसकेका आचार्यको नेतृत्वमा यस कलेजमा सेवा सुरु गरिएको हो ।
आचार्यसँगै कार्डियक सर्जन डा. अल्का सिंहसहितको टोली रहेको छ । टोलीले सोही अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्सको मुटुको शल्यक्रिया गरेको हो । आचार्यले भने, ‘मुटुको चार कोठामध्ये माथिको दुई कोठाको बीचमा प्वाल परेको थियो ।’ जन्मजात यो समस्या भएकी २४ वर्षीया युवतीको सफल शल्यक्रिया गरिएको हो । अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति भएकाले नियमित यो सेवा दिन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी यहाँ गंगालालमा हुने खर्चमा मुटुका सबै खाले शल्यक्रिया गर्न सक्छौँ ।’
यो सेवा राजधानी केन्द्रत भएपछि मोफसलमा सेवा दिनका लागि आफूले राजधानी छाडेको भन्दै उनले अब मुटुको शल्यक्रियाका लागि राजधानी पुगेर पालो कुर्न नपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा हुने खर्चमा त्यही सरहको सेवा पालो कुर्न नपरी दिन सक्छौँ ।’ मोफसलमा यस विषयमा बुझाउन केही समय लाग्ने भन्दै उनले सरकारले दिने एक लाखको असहाय उपचार सहयोग र स्वास्थ्य बिमाको सेवा पनि यहाँ पाइने जानकारी दिए ।
सरकारले काठमाडौंको गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमा १४ वर्षमुनि र ७५ वर्ष माथिकालाई मुटुको बाथरोगको शल्यक्रिया गर्दा निःशुल्क गरेको भन्दै प्राडा आचार्यले भने, ‘यो सुविधा मोफसलका अस्पताललाई पनि दिनुपर्छ ।’ मुटुको उपचार राजधानीमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले भने, ‘म सेवा विकेन्द्रित गर्न चितवन आएको हुँ ।’ काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा डा. आचार्यले आफ्नो पत्नीको जागिर छुटाएर त्यहाँको भन्दा कम सुविधा लिएर यहाँ आएको बताए । उनले भने, ‘मैले मुटु रोगको सेवा मोफसलमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोचले यहाँ आएको हुँ ।’ राजधानीमा मुटुको शल्यक्रियाका लागि लामो पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘चितवनमा यो सेवा नियमित पाउँदा धेरै बिरामीले कम खर्चमा आफ्नै घर नजिकै उपचार पाउँछन् ।’
प्राडा आचार्यको समूहले गंगालालमा तीन हजारभन्दा बढी मुटुको शल्यक्रिया गरिसकेको छ । यसैगरी मेडिसिटी अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्टको रूपमा उनले तीन वर्ष काम गरेका छन् । उनले बंगलादेशबाट एमबिबिएस र एमडिपछि सिंगापुरबाट फेलोसिप गरेका छन् ।
अस्पतालका अध्यक्ष न्यौपानेले यहाँ मुटुसम्बन्धी सबै खालको उपचार हुने बताए । अस्पतालमा कार्डियोलोजीसम्बन्धी प्राडा श्यामराज रेग्मीसहितको टोलीले उपचार गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुटुसम्बन्धी उपचारका लागि अब राजधानी र विदेश जानु पर्दैन ।’ राजधानी गएर पनि उपचार गर्ने चिकित्सक र आवश्यक उपकरण यही व्यवस्थापन भएकाले राजधानी जान नपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘काठमाडौंबाट पनि हामीकहाँ बिरामी आउन थालेका छन् । बाहिरबाट काठमाडौं गएकाले पनि भरतपुर ठीक छ भनेर आउने गरेका छन् ।’
अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रताप देवकोटाले अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै आएको बताए । मुटुसँगै कलेजो प्रत्यारोपण, न्यूरो सर्जरीजस्ता जटिल उपचार सेवा पनि अस्पतालबाट दिइँदै आएको उनले बताए । छिट्टै मिर्गाैला प्रत्यारोपण सेवा पनि सुरु गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । राजधानीका अस्पतालमा लामो अनुभव लिएका विज्ञ चिकित्सक यहाँ आएसँगै जटिल किसिमका उपचार सहज बनेको उनको भनाइ छ ।